Sida loo Xakameynayo Msvcr71.dll waa la Dhimay ama Lagu Helay Cillado
Windows Fariin qalad ah
Sida loo Xaqiijiyo Msvcr71.dll Looma Helin ama La Dhimo
Tusaha Xallinta Dhibaatooyinka Msvcr71.dll Cilladaha
Qalabka msvcr71.dll wuxuu dhacaa marka DLL uu maqan yahay, la tirtiro, ama la jabiyo sida habka software-ka ku tiirsan uusan u isticmaali karin faylka sida loogu talagalay in loo isticmaalo.
Dhibaato leh diiwaanka , infekshanka fayraska ama barnaamijka xun ee lagu rakibo kombiyuutarka, ama xitaa arrin la xiriira qalabka kombiyuutarka ayaa sababi kara khaladaadka msvcr71.dll.
Marka arrimo la socdaan faylkan DLL gaar ah, cilladaha ku tilmaamaya dhibaato msvcr71.dll waxaa lagu soo bandhigi karaa fariimaha qaldan ee soo socda:
Msvcr71.dll Looma Helin Codsigan ayaa ku fashilmay inuu bilaabo maaddaama msvcr71.dll aan la helin. Dib u sameynta codsiga ayaa laga yaabaa inay xalliso dhibaatadan. Ma heli karo [PATH] \_ msvcr71.dll Faylka msvcr71.dll waa maqan yahay. Ma bilaabi karno [ARJIGA]. Qaybta loo baahan yahay waa la waayay: msvcr71.dll. Fadlan rakib [APPLICATION] mar kale.
Inta badan fariimaha khadadka msvcr71.dll waxay u muuqdaan marka ay isku dayayaan in ay ku shaqeeyaan barnaamij gaar ah, laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa in la arko marka la rakibayo codsi gaar ah, bilaabista ama xiraya Windows, ama laga yaabo in xataa xitaa marka lagu rakibo version cusub ee Windows.
Waxaad arki kartaa fariin qalad ah msvcr71.dll oo ku saabsan barnaamij kasta oo Windows ama nidaamka hawlgalka oo isticmaalaya faylka, sida Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , iyo Windows 2000.
Sidee loo saxi karaa Msvcr71.dll qalad
Muhiim: Marna ha ka soo qaadin faylasha DLL-ka website kaasi oo aanad 100% ku kalsoonayn. Fiiri Sababaha Muhiimka ah MAYA si aad u soo dejiso DLL Files sababo qaar ka mid ah sababaha aan u sheegayo. Waa muhiim in aad isticmaashid oo keliya isticmaalka kalsoonida, rasmiga ah ee rasmiga ah marka aad soo dejisanayso faylasha sida msvcr71.dll.
Xusuusin: Bilaabista Windows ee Nidaamka Badbaadada ah waxay noqon kartaa ikhtiyaarkaaga keliya ee lagu dhammaystiro inta badan talaabooyinkan haddii faylka msvcr71.dll uu ka hortagayo Windows si caadi ah loo bilaabo.
Dib u soo celinta msvcr71.dll ka soo Wareegga Cas . Faylka msvcr71.dll maqan ayaa macneheedu noqon karaa in adiga ama barnaamijka kombiyuutarkaaga laga tirtiray faylka, sidaas darteed u diraya Recycle Bin. Faylasha Msvcr71.dll oo aad ogtahay in ay ku jiraan Dib-u-Isticmaalka Kacaanka hal dhibic, laakiin tan iyo markii la "si rasmi ah" loo tirtiray faaruqinta Dib-u-Celinta Qashinka, waxaa laga yaabaa in lagu soo celiyo barnaamij dib u soo kabasho oo lacag la'aan ah .
Muhiim: Tallabadan waa in la sameeyaa oo keliya haddii aad ku kalsoon tahay in faylka msvcr71.dll aad soo celinayso dhab ahaantii ma aha virus ama feyl aan qalad ah DLL ee la tirtiray sabab wanaagsan oo ah meesha ugu horeysa. Haddii aad si fudud u tirtirto shil, dabadeed dib u soo celinta waa gebi ahaanba ganaax.
Samee baaritaanka fayrus / nadaafad ee nidaamkaaga oo idil . Haddii aad ka shakisan tahay in khaladaadka msvcr71.dll ay si ula kac ah ula xidhiidho barnaamijyada xaasidnimada ama fayruusyada ku jira kombiyuutarka, ka dibna socodka baaritaanka si looga saaro infekshanka ayaa xalin kara dhibaatooyinka DLL.
Dib u habee barnaamijka isticmaalaya faylka msvcr71.dll . Haddii barnaamijka gaarka ah uu yahay mid kuu sheegaayo inaad aragto qaladka, ka dibna dib u sameynta waxay dib u cusbooneysiin kartaa feylka iyo ka saarida qaladka.
Muhiim: Tijaabi sida ugu fiican ee aad u dhamaystiri lahayd tallaabadan. Faylka "rasmiga ah" ee msvcr71.dll ee Windows ku yaal wuxuu ku yaalaa faylka hoose ee C: \_ Windows \_ directory, sidaas darteed dib u dhiska software wuxuu u badiyaa inuu qaado nuqul cusub DLL faylka.
Soo rog faylasha msvcr71.dll ilo lagu kalsoon yahay. Waxaan ogsoonahay inaan ka digay kor ku xusan faafinta DLL faylasha, laakiin AddictiveTips (websaydhan oo la xariira halkan) waa websaydh aan ku kalsoonahay oo bixiya fayl aan mug leh oo aan micno lahayn msvcr71.dll oo aad ka soo dejisan karto haddii aad kombuyutarkaaga ka maqan tahay DLL.
Muhiim: Download download ee msvcr71.dll ee halkan ku yaal waa ammaan in la isticmaalo. Waa gebi ahaanba amaan ah in la raaco tilmaamahooda ku saabsan hagaajinta arrintan. Marka la soo dajiyo oo lagu dhejiyo faylka ku haboon sida lagu sharaxay xiriirka AddictiveTips, waxaad u baahan kartaa inaad iska diiwaan galiso faylka DLL. Si aad taas u sameyso, furitaanka amarka furan oo geli regsvr32 msvcr71.dll .
Tafatir diiwaanka Windows haddii qaladkaaga msvcr71.dll quseeyo xidhiidhka SQL. Raac tilmaamahan [OracleNZ] si loo sameeyo diiwaanka diiwaanka gaarka ah ee loo baahan yahay si loo xaliyo arrintan.
Fiiro gaar ah: Xaqiijinta DLL waxay ku haboon tahay oo kaliya haddii aad la kulantay "msvcr71.dll waa la waayey" marka uu furo SQL Developer markii ugu horeysay ka dib markii lagu rakibo, taas oo u muuqata inay tahay dhibaato caadi ah.
Isticmaal Nidaamka Dib-u-Celinta si aad u joojiso isbeddelka nidaamka dhawaanta Haddii DLL ay sii socoto marxaladdan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isku daydo inaad dib ugu noqoto kombuyutarkaaga waqti hore iyadoo la isticmaalayo Nidaamka Dib u-celinta . Tani waxay bedeleysaa faylasha nidaamyada muhiimka ah ee dib loogu celiyo gobolka ay ku jireen taariikhda hore, taas oo noqon karta waxa aad u baahan tahay inaad sameyso haddii qaladkaaga msvcr71.dll ay sababtay isbedel lagu sameeyay faylka muhiimka ah ama qaabeynta.
Ku cusbooneysii darawaliinta qalabyada qalabka ee laga yaabo inay la xiriiraan msvcr71.dll. Sidoo kale talaabada 3aad , haddii aad qaadato "Faylka msvcr71.dll waa maqan yahay" markaad samaynayso wax gaar ah sida sida ciyaaraha 3D-video, tusaale ahaan, isku day inaad cusbooneysiiso darawaladaada kaarkaaga video .
Xusuusin: Faylka msvcr71.dll wax kuma laha wax walba oo la sameeyo kaararka video, tani waxay tusaale ahaan muujineysaa inaad u baahan tahay inaad daawato wixii dhacaya wakhtiga qaladka si aad u hagaajisid sida dhibaatada loo xaliyo.
Ku sii wad gaari wadaha si aad horay ugu rakibtay . Haddii khaladaadka msvcr71.dll bilaabmaa ka dib markii aad soo cusbooneysiisay darawal gaar ah, ka dibna waxaa laga yaabaa in la xaliyo adoo ka saaraya darawalka iyo dib ugu noqoshada mid hore loo rakibay.
Hirgalinta sfc / scannow Amarka Fayliyaha Diiwaan-geliyaha File si uu u baddalo nuqul ka maqan ama jaban ee faylka DLL. Iyadoo ku xiran nuqulkaaga Windows, faylka msvcr71.dll ayaa laga yaabaa in ay bixiso Microsoft, taas oo dhacda iyada oo la adeegsanayo Qalabka File File Checker (SFC) wuxuu dib u soo celin karaa xaalad caadi ah.
Ku rakib wixii cusbooneysiin ah ee ku haboon Qalabka adeega iyo waxyaallaada laga helo Windows Update ayaa laga yaabaa inay cusboonaysiiso ama gabi ahaanba beddelaan qaar ka mid ah dhowrka daraasaad ee Microsoft oo loo qaybiyay faylasha DLL ee kombuyuutarkaaga. Waxaa laga yaabaa in ay dhacdo in dhibaatada msvcr71.dll ay ku jiraan mid ka mid ah kuwan cusub.
Tijaabi RAM ka dibna tijaabi darawalkaaga adag . Xusuustaada kombiyuutarkaaga iyo darawalada adag ee adag ayaa si sahlan u tijaabinaya, oo ku guuldareysta mid ka mid ah waxay u muuqan kartaa inuu yahay dembiilaha qaladaadka msvcr71.dll.
Ogow: Waxaa laga yaabaa inaad ku dhamaato inaad bedesho xusuusta ama aad bedesho qashin adag oo mid kasta oo ka mid ah imtixaannadani ku dhacaan.
Dayactir qalabkaaga Windows haddii talaabooyinka kor ku xusan aysan weli xalin faylasha msvcr71.dll. Tani waa inay dib u soo celisaa dhammaan faylasha DLL ee dib ugu noqoshadooda qaabka ay u shaqeeyaan sida haddii aan la bedelin ama la isticmaalin.
Isticmaal nadiifiyaha diiwaanka bilaashka ah si loo hagaajiyo arrimaha la xiriira feylkan. Qalabka nadiifinta diiwaanka ayaa badanaa xalin kara dhibaatooyinka la xiriira faylasha DLL adoo ka saari doona diiwaangelin aan sax ahayn oo keeni kara qaladka DLL.
Sameyso rakibid nadiif ah ee Windows haddii mid ka mid ah tallaabooyinka kor ku xusan ay awoodeen in ay hagaajiyaan qaladka msvcr71.dll. Sida codadkeedu, nadiifinta nadiifinta ee Windows waxay tirtiraysaa rakibaadda hadda iyo dhammaan faylasha ku yaal wadada adag , ka dibna rakibi doona nuqul cusub oo cusub ee OS ah.
Muhiim: Fadlan ha u boodin talaabadaan ka hor intaadan isku dayin kuwa kale kor. Tani waa xallinta ugu burbursan sababtoo ah waxay ka saartaa wax kasta oo aad ka bilowdo xoqdo. Waa in la sameeyaa oo kaliya haddii aadan nasiib lahayn tallaabooyinkii hore.
Xallinta dhibaatada qalabka haddii aan mid ka mid ah talaabooyinka la xidhiidha ee la xidhiidha barnaamijyada la xaqiijiyay. Xaaladdan oo keliya, sababta kaliya ee suurtagalka ah ee khaladaadka msvcr71.dll ee dhibicdani waa qalab aan qalafsaneyn.
Weli Miyuu Tahay Msvcr71.dll Issues?
Miyaad doorbidi lahayd qof kale oo ku xallinaya arrintan DLL? Eeg Sidee Baan Ku Heli Kahayda Computerka? liiska buuxa ee xulashooyinkaaga taageerada, oo lagu daray caawinaad kasta oo la mid ah sida lagu ogaado kharashka dayactirka, keydinta faylashaada haddii aad u baahan tahay in loo wareejiyo meelo kala duwan, dooro adeeg dayactir, iyo wax badan oo kale.
Sidee loo Bixiyaa D3dx9_29.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sida loo Xaqiijiyo D3dx9_33.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sidee Loo Helaa X3daudio1_6.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sidee loo Xaqiijiyay STOP 0x0000000E Khaladka
Sida loo Xakumo Xeerka 28 Cilladaha
Sidee loo Xaqiijiyay STOP 0x00000006 Khaladka
Sida loo Xaqiijiyo Dwmapi.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Sida loo xakameeyo Binkw32.dll Qalad bay ku jirtaa
Sida loo Xambaarto Xapofx1_5.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Baro sida loo kala-sooco Noocyada Lagu casriyeeyo casriga
6 Qodobbo muhiim ah oo ah Istaraatijiyad wax ku ool ah
Cayaaraha 10-aad ee Minecraft-Kusoo Baxda
Sida Loo Beddelo Isku Beddelida Inta Laga Jiro Warqadaha Isticmaalka GIMP
Micrsoft Publisher 2010 - Raadinta Kowaad
Fariimaha Nikon Nikon-ka
Sawirada Dijital ah
Excel Tallaabo Adiga Tababarka Aasaaska ah
Siyaabo Wanaagsan ee Loo Daabacayo Diiwaanada Wireless Connections
Internet & Shabakad
Waa maxay Gacanka GPSac?
Sidee loo Helaa Helper.dll Looma Helin ama La Dhimo Matalista
Wanaagga ugu Fiican ee Cusboonaysiinta Macmiilka Webka Apache
6 Codsiyada Nalalka Bariifka Nalalka ah si loo yareeyo Cadaadiska indhaha sanadka
10 Meelo leh buug-gacmeed bilaash ah ee loogu talagalay iPhones
Sida loo Xaqiijiyo Gsdll32.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
The Nasty Dadka ee Wide Web Weyn
Sida loo tirtiro Xisaab Yandex.Mail
Abuuri Xaanshiyo ama To-Do ee Apple Mail
Baro sida loo qaabeeyo Yahoo Mail Account Isticmaalka iPhone Mail App
SharpReader - RSS Feed Review Review Review
Sida loo Isticmaalo Charms Bar ee Windows 8
Sida Loo Dhigo & La Dhaqmo iPod Touch
Maxay Tahay CAMREC File?